महामारीका सात महिना, सुनसान स्कुल !
घाटगाउँ डटकम सोमबार, असोज १२, २०७७, ०२:३४:००
११ असोज, सुर्खेत । २०७६ चैत १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको ७ महिनासम्म प्राय सबैजसो सार्वजनिक स्कुल ठप्प भए । कोरोना भाइरसको महामारीले निम्त्याएको लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाले सबैभन्दा ठूलो मार शिक्षा क्षेत्रमा परेपनि चुप बस्नुको विकल्प रहेन् ।
जसको कारण ७ महिनासम्म विद्यालय बन्द रहे । जनयुद्धकालमा आफ्ना पकड क्षेत्रमा स्कुल बन्द गर्ने तत्कालिन नेकपा माओवादीको निर्देशनलाई समेत चुनौति दिएर सञ्चालन भइरहने चौकुने ९ र १० का विद्यालय यसपटक ठप्प जस्तै बने ।
घाटगाउँमा रहेका सरस्वती मावि र विरगौडा आधारभूत विद्यालय ७ महिना बन्दको बन्दै रहे । यी विद्यालय तत्कालिन समयमा माओवादीको किल्ला मानिएपनि बन्द भएका थिएनन् । तर कोरोना महामारीका कारण विद्यालय ७ महिनासम्म पनि खुलेनन् ।
असोज दोस्रो हप्तापछि गाउँपालिकाको निर्णयअनुसार विद्यालय सञ्चालन हुने भएका छन् । विगतमा एक महिने बर्षे बिदामा मात्रै बन्द हुँदा चौरमा दुबो बढेर घास हुने विद्यालयमा अहिले सुनसान मात्रै छ । विद्यालयका झ्यालढोकामा माटो भरिएको छ भने लगाताराको बर्षाको झरीले टिनको छानो पूरानो र खिया लागिसकेको अवस्था छ ।
चौरमा दुबोको रजाई छ । घास बढेर जंगलको जस्तो छ । स्कुलमा डेस्क बेन्चमा माटो भरिएको छ भने ७ महिना प्रयोगविहिन हुँदा स्कुल बिरानो लाग्न थालेको छ । यो ७ महिनाको पट्यारलाग्दो समय चिर्दै सोमबारदेखि स्कूलमा विद्यार्थी फेरि भरिभराउ हुदै छन् । विगतजस्तो स्कुलमा खुलेर पढ्न नपाईपनि बर्षौ लामो जस्तो लागेको कोरोना महामारीको कठिन समय भने गुज्रिएको छ ।
यसले थोरै भएपनि विद्यार्थीको अनुहारमा मूस्कान ल्याउने अपेच्छा छ । यद्यपी स्कुल लागेपनि सामाजिक दुरी, मास्क, स्यानिटाईजरको प्रयोग र स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्नेछ । जसले महामारीलाई केही हदसम्म सामान्य बनाएपनि बिर्साउन दिने छैन् । जबसम्म कोरोनाको भ्याक्सिन नेपाल आउने छैन् । तबसम्म हामी सचेत प्राणी भएपनि सामाजिक दुरी कामय गरेर बस्नुको विकल्प हुने छैन् ।
तस्बिर : सरस्तवी माविका प्रअ भरतबहादुर रावलको फेसबुकबाट
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १२, २०७७, ०२:३४:००
चौकुनेका युवक रावलको दक्षिण कोरियामा मृत्यु सोमबार, असोज १२, २०७७, ०२:३४:००
पन्त र शाहीको हातमा रविन्द्र स्मृती ब्याडमिन्टन प्रथम पुरस्कार सोमबार, असोज १२, २०७७, ०२:३४:००
भेरी कर्णालीको दोभान विकास गर्ने कहिले ? सोमबार, असोज १२, २०७७, ०२:३४:००
हुम्लामा खाद्यान्न अभाव सोमबार, असोज १२, २०७७, ०२:३४:००